May 2014 | OKKALA STORE
Miss Asia Pacific 2014 မယ် မေမြတ်နိုးဆွတ်ခူး
အခြောက်သရဲ - ဒိန်းဒေါင်
THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE - Full Movie
Non-Stop - Full Movie
As the Light Goes Out (2014 Full Movie)
သားသား ( မောင့်ချစ်သူ Return) New CD Album
ဖေမြင့် - မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား.pdf
RoboCop (2014) Full movies
ကာတွန်းတွတ်ပီ - ကျွန်ုပ်နှင့်မြို့ ပြခရီး(ဆွေမင်း-...
The Lost Bladesman - Guan Yu (Donie Yen) Full HD [...
Liverpool FC Goals Season 2013 - 2014 (2) HD
ဦးနှောက်တစ်လုံး၊ လက်တစ်ဖက်၊ မျက်စိတစ်လုံး ဘဝခရီးအ...
Pompeii (2014) English စာတန်းထိုး
R.I.P.D. Official International Full Movie
စပွန်ဆာ ပျိုပျို နှင့် အော်စကာ ကိုကို အပိုင်း(၂)
စပွန်ဆာ ပျိုပျို နှင့် အော်စကာ ကိုကို အပိုင်း(၁)
The Amazing Spider-Man2- Full Movie
ပါရဂူ ( သူတို့အတွေး သူတို့အမြင်)
Frozen Full movie 2013 HD
လူထုစိန်ဝင်း ( ရှက်စိတ် )
တေဇ ရုပ်စုံ ကာတွန်း
ချင်းလေး ( Chinn Lay ) – အမြဲတမ်းနားခိုပါ (New CD ...
Andriod ဖုန်းနဲ့ ဗီဒီယို ကာရာအိုကေ စာတန်းထို့ချင်တ...
THE FOUR2(2013) - English Version Story
300- Rise of an Empire ( ရုံတင်ကား)
The Monkey King ( ရုံတင်ကား)
ပျောက်ဆုံးခြင်း (နေတိုး & ရွှေမှုန်ရတီ)
လူထုစိန်ဝင်း ( ရှက်စိတ်)
သရဲရေးတဲ့ဖူးစာ ( မြင့်မြတ် & သက်မွန်မြင့် )
The Captian America ( The Winter Solider )
Android Phone Driver အစုံ
HOBBIT ( Full Movie HD လုံးဝအကြည်)
ကျွန်တော့ချစ်သူ ပူစီဖောင်း(စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် &...
ကညာပျိုနှင့် ပရာဒို( ကျော်ရဲအောင် & သင်ဇာနွယ်ဝင်း)...
MAROON5- OVEREXPOSED CD Album
Chill Session - ၀ိသေသ (2013)
သိန်းလင်းစိုး ( T - Virus )
ဘန်နီဖြိုး - လူပျိုလှည့်တေး [CD ] okkala mp3 sele...
Shew Htoo Collection CD Album
ဆိုတေး ( မင်္ဂလာပါ - CD Album )
သားကြီး ပီယဆေး ( CD - Album )
ပိုပို ချစ်ခဲ့ဖူးသမျှ ( CD - Album )
9 Night New CD Album
အောင်လ ပင်လယ်ထဲက မြစ်များ
Posted by okkala net at 10:00 PM No comments:
Posted by okkala net at 5:28 AM No comments:
Posted by okkala net at 4:32 AM No comments:
အခြောက်သရဲ - ဒိန်းဒေါင် ဇာတ်ကားတင်ပေးချင်ပေမဲ့ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းရင် ကြည့်လို့မရမှာစိုးလို့ Player မတင်ပေးတော့ဘူး။ Full Moive ကိုတော့ okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 10:31 PM No comments:
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST - 2014 full movie
နိုင်ငံခြားမှာတောင် မတင်သေးတဲ့ကားကို okkala ကတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ အခုတော့ Trailer တင်ပေးထာပါတယ်
Posted by okkala net at 8:35 PM No comments:
THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE - Full Movie ..okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
(2014 ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးကားကို ပြောပါဆိုရင် ဒီကားကို ညွှန်ရမှာပဲ)
အခုတော့ Trailer တင်ပေးထာပါတယ်
Posted by okkala net at 5:25 AM No comments:
Non - Stop - Full Movie ကိုတော့ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
(Hollywood Full Moive - ကြည့်ခဲ့ဖူးသမျှ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို မေ့သွားစေမယ့် ဇာတ်လမ်း)
အခုတော့ Trailer တင်ပေးထားပါတယ်
Posted by okkala net at 5:12 AM No comments:
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:51 AM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အထူးဓမ္မလက်ဆောင် EBook
Posted by okkala net at 3:37 AM No comments:
သားသား ( မောင့်ချစ်သူ Return) New CD Album အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါပြီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ okkala mp3 selection များထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ သီချင်းများထဲတွင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 10:06 AM No comments:
Posted by okkala net at 3:02 AM No comments:
အခုမှ အသစ်ထွက်ထားတဲ့ ကို အောင်လရဲ့ “မှားခဲ့လား ရယ် ပေါ်ပေါ့ပေါ် ကို
Genre လေးမျိုးလောက်နဲ့တီးထားတယ်၊ (Hardstyle) လို့သာပြောပေမယ့်၊
တကယ်တော့ Hardstyle,Trap,Hardcore,Dubstep လေးမျိုးနဲ့တီးထားတာ
ပါ၊ ကဲ… ကျွန်တော့ ဖန်တီးမှုလေးကို နားထောင်ချင်ရင်တော့
1.Direct Download Link – http://adf.ly/nX9pi
2.Direct Download Link – http://adf.ly/nXAFD
3.Download Link – http://adf.ly/nWjso
4.Download Link – http://adf.ly/nXAHO
မှတ်ချက်။ ။3နဲ့ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် Download Now ရဲ့ အောက်က “အမှန်ချစ်” လေးကို ဖြုတ်ပြီးမှ
credit to myanmarmp3album
Posted by okkala net at 2:55 AM No comments:
ဒီနှစ်ထဲမှာ Hot သိပ်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားပြပါဆိုရင်..
အခုက လုံးဝ အကြည်ပါ..
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 2:28 AM No comments:
ကာတွန်းတွတ်ပီ - ကျွန်ုပ်နှင့်မြို့ ပြခရီး(ဆွေမင်း-ဓနုဖြူ)
Posted by okkala net at 4:23 AM No comments:
The Lost Bladesman - Guan Yu (Donie Yen) Full HD [Engsub + Some sub]
IP Man ဇာတ်ကားနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ မင်းသား Donnie Yen
ရဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတကားပါ..
YouTube မှာ တင်ထားတာဆိုတော့
ဖုန်းသမားတွေလည်း ကြည့်လို့ အဆင်မှာပါ..
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
credit to http://channyein82.blogspot.com/2014/05/the-lost-bladesman-2011.html
Posted by okkala net at 2:11 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 10:32 PM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 10:17 AM No comments: Links to this post
Liverpool FC Goals Season 2013 - 2014 (2) HD အပြည့်အစုံပါ ကြိုက်တယ်မှတ်လား?
Posted by okkala net at 10:07 AM No comments: Links to this post
Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown ( World cup Song )
Posted by okkala net at 10:00 AM No comments: Links to this post
ဦးနှောက်တစ်လုံး၊ လက်တစ်ဖက်၊ မျက်စိတစ်လုံး ဘဝခရီးအဆက် - မောင်စိန်ထွေး စာပေဗိမာန်စာမူဆုရ
Posted by okkala net at 5:24 AM No comments:
Pompeii (2014) English စာတန်းထိုး okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:56 AM No comments:
ကောမစ် စာအုပ် “Rest In Peace Department” ကို အခြေခံပြီး ဒါရိုက်တာ ရောဘတ်ရှဝန့် က ရိုက်ကူး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.
ဘော်စတန် ရဲအရာရှိ နစ်ဝေါ်ကာ နဲ့ သူ့ပါတနာ
ဘော်ဘီဟေး တို့ဟာ မူးယစ် ဆေးဝါး အမှုတစ်ခု မှာ ရွှေပြား တွေကို ဖမ်းဆီး
ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက် ဟာ အဲဒီ ရွှေပြား တွေကို အထက်ကို
မအပ်ဘဲ ယူထား လိုက်ကြ ပါတယ်။ နစ်ကတော့ သူ့ဇနီးနဲ့ သူ့အတွက် ပို
ကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀တစ်ခု ဖန်တီး ချင်လို့ဖြစ် ပါတယ်။ ဘော်ဘီဟေး ကတော့ ဘယ်လို
ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ် ဆိုတာကို မသိရ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ နစ်ဟာ
စိတ်ပြောင်းပြီး ရွှေပြားတွေကို အထက် ကိုအပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါ တယ်။
ဒါကို ဘော်ဘီဟေး က သဘော မတူတဲ့ အတွက် နစ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်ဆင်ရေး
တစ်ခုမှာ အပျောက် ရှင်းလိုက် ပါတယ်။
နစ်ဟာ သေဆုံး သွားခဲ့ပါ တယ်။ သေဆုံးပြီး
နောက်မှာ နစ်ကို ဘော်စတန် “Rest In Peace Department” က စုဆောင်း
ခေါ်ယူ လိုက်ပါတယ်။ “Rest In Peace Department” ဟာ သေဆုံးပြီး ဖြစ်တဲ့
ရဲအရာရှိ တွေကို စုဆောင်းပြီး (သေလွန်ပြီး နောက်မှာ ရဲတွေ ရှိသလို
လူဆိုးတွေ လည်းရှိပါ တယ်။ အဲဒီ လူဆိုးတွေ သာမန် လူတွေကို မနှောင့်ယှက်
ရအောင် ကာကွယ်ဖို့ အတွက် “Rest In Peace Department” ဆိုတာ ရှိနေတာ
မကောင်းဆိုးဝါး လူဆိုးတွေ ကို ဖမ်းဆီး
နှိမ်နှင်းနေ တဲ့ အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လည်း နစ်ဟာ ပါတနာ တစ်ယောက်ရ
ပါတယ်။ နစ်ရဲ့ပါတနာ ကတော့ ရွိုင်းဖြစ် ပြီး ရွိုင်းဟာ ၁၈၈၀ ပြည့်နှစ် တွေက
အမေရိကန် ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သူပါ။
အဲဒီ နောက်မှာ မကောင် ဆိုးဝါး လူဆိုးဖြစ်
ဖွယ်ရှိသူ တစ်ဦး ကို သွား စစ်ဆေး ရင်းနဲ့ နစ်နဲ့ ရွိုင်တို့ ဟာနစ်
ရထားခဲ့ တဲ့ရွှေတွေ နဲ့ အလား တူတဲ့ ရွှေပြား တွေကို ဖမ်းဆီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ နောက်မှာ နစ်တို့ သိလိုက် ရတာ ကတော့ မကောင်း ဆိုးဝါး လူဆိုး တွေဟာ
ရွှေပြား တွေကို စုဆောင်း နေတယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုးတွေ ဘာကြောင့်
ရွှေပြားတွေ ကို စုဆောင်း နေတယ် ဆိုတာ ကို နစ်နဲ့ရွိုင် ဖော်ထုတ် ရမှာ
ဒါကြောင့် မို့ နစ်တို့ဟာ ဘော်ဘီဟေး ကို
နောက် ယောင်ခံ လိုက်ကြ ပါတယ်။ ဘော်ဘီဟေး ဟာ ရွှေပြား တွေကို စုဆောင်း နေပြီး
နစ်ဆီက ရွှေပြား တွေကို လည်း နစ်မိန်းမ ဆီက ယူပြီး ဖြစ် ပါတယ်။ နစ်တို့ဟာ
ဘော်ဘီဟေး ကို နောက်ယောက် ခံလိုက်ရင်း မကောင်း ဆိုးဝါး လူဆိုးတွေကို
ခြေရာခံမိပါတယ်။ ဘော်ဘီဟေး ဟာလည်း မကောင်း ဆိုးဝါး လူဆိုး ၁ယောက် ဖြစ်တယ်
ဆိုတာ ကိုလည်း သိလိုက် ရပါတယ်။ ဘော်ဘီဟေး ဟာ ရွှေပြားတွေ ကို စုဆောင်းပြီး
လူသား တစ်ယောက် ရဲ့သွေးနဲ့ တမလွန် က လူဆိုတွေ ကို ကမ္ဘာဆီ ပြန်ခေါ်ဖို့
ကြိုးစားနေ တာဖြစ်ပါ တယ်။
နစ်နဲ့ရွိုင် ဟာ ဘော်ဘီဟေးကို “Rest In
Peace Department” ဆီကို ဖမ်းခေါ်လာခဲ့ပါ တယ်။ ဘော်ဘီဟေးကလည်း အသာတကြည်
လိုက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘော်ဘီဟေး က နစ်တို့ကို ထောင်ချောက်
ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး “Rest In Peace Department” အထဲက သက်သေ အဖြစ်
သိမ်းဆည်း ထားတဲ့ ရွှေပြား တွေကို သူ့နောက် လိုက်တွေနဲ့ ခိုးယူ ထွက်ပြေး
လွတ်မြောက် သွားကြပါတယ်။ တမလွန်က လူဆိုးတွေ ကိုပြန်ခေါ် ဖို့ အတွက်
ရွှေပြားတွေ အလုံ အလောက် ရသွားခဲ့တဲ့ ဘော်ဘီဟေး တို့ဟာ လူသား
တစ်ယောက်ရဲ့သွေးနဲ့ တမလွန် က လူဆိုးတွေ ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားကြ ပါတယ်။
အဲဒီလူသား ကတော့ နစ်ရဲ့ဇနီး ဂျူလီယာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ Trailer တင်ပေးထားပါသည်။ Okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:13 AM No comments: Links to this post
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ okkala မြန်မာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင်လဲ
Posted by okkala net at 4:00 AM No comments: Links to this post
The Amazing Spider Man2( Full Movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို များထဲတွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အခုတော့ Trailer တင်ပေးထားပါတယ်
Posted by okkala net at 7:12 PM No comments:
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Animation | Action | Adventure သုံးမျိူးလုံးကို
Animation movies တွေထဲမှာ လက်ရှိ Hot ဖြစ်နေတဲ့ ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်..
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့် စေချင်တယ်..
ကလေးရှိတဲ့ မိသားစုတွေဆိုရင် ကလေးတွေ မရိုးအောင်ကြည့်ကြမယ့်
credit to channyein
okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 6:12 AM No comments:
ဒေါင်းလုပ်ရန်....http://www.mediafire.com/download/jn7h983g9odj8sq/ASH+Collection+%40+MAMC.zip credit to myanmarallmusicchannel
okkala mp3 selection ထဲတွင် လဲ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 5:49 AM No comments:
Posted by okkala net at 2:54 AM No comments:
အော်စကာဆုရတဲ့ Forzen Animation ကားကို ကြည့်ဖူးလား
အောက်ပါလင့်မှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကွန်မကောင်းရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ okkala နိုင်ငံခြား ဗီဒီယိုထဲတွင် အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 12:24 AM No comments: Links to this post
X- Men Origins Wolverine Full Movie ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
Youtube က မကြည့်ချင်ရင်လဲ ကျွန်တော်တို့ okkala နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 5:21 AM No comments:
Posted by okkala net at 5:08 AM No comments:
Posted by okkala net at 5:04 AM No comments:
Posted by okkala net at 4:54 AM No comments:
ချင်းလေး ( Chinn Lay ) – အမြဲတမ်းနားခိုပါ (New CD ALBUM)
ချင်းလေး ( အမြဲတမ်းနားခိုပါ ) ( mp3 selection ထဲတွင် ၀င်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါပြီ
၁ ။ အလကား
၂ ။ အမြဲတမ်းနားခိုပါ
၃ ။ သို့
၄ ။ ငါ ….. မင်း
၅ ။ မေ့လို့သွားပြီလား
၆ ။ ယုံလိုက်
၇ ။ ခဏလေးပါ
၈ ။ အဓိပါယ်မဲ့စွာလောင်မြိုက်ခြင်း
၉ ။ ငါ့ရဲ့အဖြစ်
၁၀ ။ ခိုင်မြဲခြင်း
၁၁ ။ တစ်ဖက်သက်
၁၂ ။ မသေချာနေ့ရက်များ
Posted by okkala net at 3:30 AM No comments:
credit to http://www.malaysiaonlineradiomedia.com
Google Drove, Code Google
Posted by okkala net at 2:00 AM No comments:
credit to myanmarsubtitlemovie
Posted by okkala net at 1:23 AM No comments:
Final Destination5မြန်မာစာတန်ထိုး ( နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
အပိုင်း (1) တုန်းကထက် ဒီဇာတ်ကားက ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းပါတယ်....
တရုတ်သိုင်းကားတွေထဲမှာတော့ တော်တော်လေးအဆင့်မြင့်မြင့် ရိုက်ကူးထားတဲ့
ဇာတ်ကားဖြစ်သလို မင်းသမီးလေး ဂူဂူး ကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာပါ....
Posted by okkala net at 6:58 PM No comments:
Lan Kwai Fong2Full Movie ( Drama ကားလေးပါ Rate 18 ကျော်ပါတယ်) နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 6:43 PM No comments:
Posted by okkala net at 4:41 AM No comments:
300- Rise of an Empire ( ရုံတင်ကား) နောက်ဆုံးထွက် နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:56 AM No comments:
The Monkey King (ရုံတင်ကား) နိုင်ငံခြား ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:39 AM No comments:
ရဲဘော်သုံးကျိပ် ( နောက်ဆုံးထွက် ဂျာနယ် & မဂ္ဂဇင်းများထဲတွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်)
Posted by okkala net at 4:31 AM No comments:
ပျောက်ဆုံးခြင်း (နေတိုး & ရွှေမှုန်ရတီ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 11:31 PM No comments:
လူထုစိန်ဝင်း ( ရှက်စိတ်) နောက်ဆုံးထွက် ဂျာနယ် & မဂ္ဂဇင်းများထဲတွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 11:19 PM No comments:
သရဲရေးတဲ့ဖူးစာ ( မြင့်မြတ် & သက်မွန်မြင့် ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 10:29 PM 1 comment:
The Captian America ( The Winter Solider ) နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 3:09 AM No comments:
Android Phone Driver အစုံ ( Phone software & Game ) ထဲတွင် ရယူနိုင်ပါပြီ
HOBBIT ( Full Movie HD လုံးဝအကြည်) နိုင်ငံခြား ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 5:30 AM No comments:
ကျွန်တော့ချစ်သူ ပူစီဖောင်း(စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် & စံရတီမိုးမြင့်) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကား
ကျွန်တော့ချစ်သူ ပူစီဖောင်း မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကား ထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
ကညာပျိုနှင့် ပရာဒို( ကျော်ရဲအောင် & သင်ဇာနွယ်ဝင်း) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကား
ကညာပျိုနှင့် ပရာဒို မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကား များထဲတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 4:00 AM2comments:
MAROON5- OVEREXPOSED ( CD - ALbum ) okkala mp3 selection ထဲက နိုင်ငံခြား သီချင်းများထဲတွင် ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 10:22 PM No comments:
Chill Session - ၀ိသေသ (2013) - CD Album ( okkala mp3 selection ထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာသီချင်းများထဲတွင် ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 10:03 PM No comments:
သိန်းလင်းစိုး ( T - Virus ) (okkala mp3 selection ထဲ နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ album ထဲတွင် ၀င်ရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 9:44 PM No comments:
ဘန်နီဖြိုး - လူပျိုလှည့်တေး [CD ] okkala mp3 selection ထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ သီချင်းများထဲတွင် ၀င်ရောက်ယူနိုင်ပါသည်။
Posted by okkala net at 8:25 AM No comments:
Shew Htoo Collection CD Album ( okkala mp3 selection ထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ သီချင်းများထဲတွင် ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 6:29 AM No comments:
ဆိုတေး ( မင်္ဂလာပါ - CD Album ) - okkala mp3 selection ထဲက နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာ သီချင်းများထဲတွင် ၀င်ရောက် ရယူနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 6:12 AM 1 comment:
သားကြီး ပီယဆေး ( New CD ALbum ) - okkala mp3 selection ..နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာသီချင်းများ ထဲတွင် ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 6:04 AM No comments:
Posted by okkala net at 5:53 AM No comments:
9 Night New CD Album ( okkala mp3 selection ထဲမှာ ရယူနိုင်ပါပြီ)
Posted by okkala net at 11:30 PM No comments:
အောင်လ ပင်လယ်ထဲက မြစ်များ New Album (okkala mp3 selection )ထဲမှာ ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 11:06 PM No comments: